NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် - - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက် Nexidia နှင့် Telestream Nexidia QC စာတန်းထိုးအတည်ပြု Tool ကိုထဲသို့ Vantage လုပ်ငန်းအသွားအလာ Automation ပတ်ဝန်းကျင်၏ပေါင်းစည်းရေးကြေညာ
Home » သတင်း » Nexidia နှင့် Telestream Nexidia QC စာတန်းထိုးအတည်ပြု Tool ကိုထဲသို့ Vantage လုပ်ငန်းအသွားအလာ Automation ပတ်ဝန်းကျင်၏ပေါင်းစည်းရေးကြေညာ
Nexidia နှင့် Telestream Nexidia QC စာတန်းထိုးအတည်ပြု Tool ကိုထဲသို့ Vantage လုပ်ငန်းအသွားအလာ Automation ပတ်ဝန်းကျင်၏ပေါင်းစည်းရေးကြေညာ
Atlanta - သြဂုတ်လ 27, 2014 - Nexidia, အသံနှင့်ဗီဒီယိုမီဒီယာအကောင်းဆုံးအဘို့အတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးနဲ့ audio ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထုတ်ကုန်များနှင့်နည်းပညာများ၏ developer များနှင့် Telestream(R), ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာကိရိယာများနှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဦးဆောင်ပေးသူ, ယနေ့ပေးသည်တဲ့မိတ်ဖက်ထုတ်ပြန်ကြေညာ Telestream Vantage အသုံးပြုသူများသည်တစ်မူထူးခြားသောနှင့်ဘက်ပေါင်းစုံအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (QC) စာတန်းနှင့်ဘာသာစကားစိစစ်အတည်ပြုဘို့ဖြေရှင်းချက်။ Nexidia QC (TM), ထုတ်လွှင့်နှင့် IP Workflows များအတွက်သရုပ်ဖော်စာတန်းများကို, ဗီဒီယိုဖော်ပြချက်များနှင့်ဘာသာစကားများ QC ကို automation များအတွက် Nexidia ရဲ့ဆုရ software ကို tool ကို, ယခု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ရရှိနိုင် Telestream Vantage v6.3 ဖိုင်-based လုပ်ငန်းအသွားအလာအလိုအလျောက်စနစ်။ အဆိုပါပေါင်းစည်းမှု Vantage ကိုသုံးပါတဲ့သူတွေကိုဖက်ဒရယ်ဆက်သွယ်ရေးကော်မရှင် (FCC သည်) ဖြင့်လိုက်နာမှုအလိုအလျောက်မှပိုကောင်းနိုင်ကြသည်ကြောင်းသေချာစေရန်ကူညီပေးပါမည် စာတန်း စည်းမျဉ်းများအဖြစ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအားပြိုင်မှုများနှင့် OTT မိတ်ဖက်များ၏ပို့ဆောင်မှုလိုအပ်ချက်များကိုအလားတူလိုအပ်ချက်များကို။
"Nexidia QC စာတန်းများနှင့်, ထွက်ရှိအရာအားလုံးထက်မတူပဲကြောင်းဘာသာစကားဖော်ထုတ်ခြင်းများအတွက်မူပိုင်ခွင့်စိစစ်အတည်ပြုကိရိယာတခုဖြစ်တယ်။ သငျသညျက add လိုက်တဲ့အခါ Telestream'' လုပ်ငန်းအသွားအလာအလိုအလျောက်နှင့် orchestration tool ကို၎င်း၏လွယ်ကူခြင်းကြောင့်လူသိများ, အမြန်နှုန်းနှင့်ပြောင်းလဲခြင်း၏အရည်အသွေးဦးဆောင် s ကို, သင်တစ်ခုတည်း automated လုပ်ငန်းအသွားအလာသို့တစ်ခုလုံးကိုဖြန့်ဝေခြင်းနှင့် QC ဖြစ်စဉ်ကိုချောမွေ့ကြောင်းထိရောက်စွာရ, "Drew Lanham ၏အကြီးတန်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့်အထွေထွေမန်နေဂျာကပြောပါတယ် Nexidia ရဲ့မီဒီယာနှင့်ဖျော်ဖြေမှုဌာနခွဲ။ "ဒီ Nexidia QC ပေါင်းစည်းမှုဖွ Telestream Vantage အသုံးပြုသူများသည်မီဒီယာ, iTunes ကို (R) နဲ့တူလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များထံမှ FCC စည်းမျဉ်းများနှင့်စာတန်းနှင့်ဘာသာစကားလိုအပ်ချက်များကိုတွေ့ဆုံ Netflix, နဲ့ Amazon သေချာ, ဘယ်နေရာမှာမဆို Vantage လုပ်ငန်းအသွားအလာအတွက် Nexidia QC ရဲ့အပြည့်အဝလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုအကျိုးရှိစွာအသုံးချမှ။ ဤသည်ကိုပေါင်းစပ်အားလုံးပလက်ဖောင်းတစ်လျှောက်ကြည့်ရှုသူများအတွက်မြင့်မားအရည်အသွေးအတွေ့အကြုံကိုအတွက်လက်စွဲဖြေရှင်းနည်းများနှင့်ရလဒ်များကိုကျော်အချိန်နှင့်ပိုက်ဆံကယ်တင်တော်မူ၏။ "
အဆိုပါ FCC သည်သရုပ်ဖော်စာတန်းများကိုပြည့်စုံနှင့်လေကြောင်းနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်ထုတ်လွှင့်သို့မဟုတ်မဟုတ်ရင်အွန်လိုင်းရရှိနိုင်လုပ်ကြောင်းဆိုသည်ယခင်ကထုတ်လွှင့်အစီအစဉ်အတွက်သွားမဆိုအစီအစဉ်အတွက်ချိန်ကိုက်မှုအတွက်ဖြစ်ကြောင်းလိုအပ်သည်။ Telestream Vantage အရည်အသွေးမြင့် transcoding နှင့်မျိုးစုံအစီအစဉ်များနှင့်ပလက်ဖောင်းထားရှိရန် scales ကြောင်းဘောင်-မှုနှုန်းပြောင်းလဲဖျော်ဖြေမှုအတွက်ဖိုင်-based tools တွေကိုတစ် suite ကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ Nexidia QC ပိုမိုမြန်ဆန်မှန်ကန်အချိန်ထက်ငါးကြိမ်အထိလုပ်ဆောင်နိုင်သည်ကိုတစ်ဦးအလိုအလျောက်ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်, နှင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာနောက်ထပ် Nexidia QC ၏နောက်ထပ်သာဓကထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်အရှိန်နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါပေါင်းစပ်ဖြေရှင်းချက်အရည်အသွေးမြင့် Deliverable ထိန်းသိမ်းနေချိန်မှာ throughput တိုးမြှင့်, ပလက်ဖောင်းနှင့်အစီအစဉ်များတစ်ဦးတိုးပွားလာ၏မျက်နှာကိုအတွက်စာတန်းလိုက်နာမှုဖြေရှင်းရန်စကေးနိုင်ပါတယ်။
"အွန်လိုင်းများ၏ပေါင်းစပ် posted ဖြစ်ကြောင်းဗီဒီယိုမှတ်တမ်းများအတွက်သရုပ်ဖော်စာတန်းများကို၏ insertion အပေါ် FCC ၏တင်းကျပ်သောစည်းမျဉ်းအသစ်နှင့်အတူ Telestream Nexidia QC နှင့်အတူ Vantage နဲ့ CaptionMaker ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ဖန်တီး QC စစ်ဆေးလျက်, သူတို့မီဒီယာနှင့်ဆက်စပ်သရုပ်ဖော်စာတန်းများကိုပြင်ပေးလို့ရပါတယ် "ဟုပေါလု Turner မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းထုတ်ကုန်စီမံခန့်ခွဲမှု၏ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကပြောကြားခဲ့သည်သေချာ Telestream.
Nexidia QC စာတန်းများကိုအလွယ်တကူထုတ်လွှင့်နှင့် IP Workflows သို့ပေါင်းစပ်ပြီးအဲဒီဘာသာစကားဖော်ထုတ်ခြင်းများအတွက်ထူးခြားသောသဘာဝဘာသာစကားစိစစ်အတည်ပြု tool ကိုပေးသည်။ Vantage အတူပေါင်းစည်းမှုအတွက်, Nexidia QC အဆိုပါ Vantage လုပ်ငန်းအသွားအလာအတွက်မဆိုအချက်မှာဖြည့်စွက်နိုင်ပါသည်။ ဒီအပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အရည်အသွေးနှင့် FCC သည်စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်စည်းမျဉ်းများကိုဖြည့်ဆည်းဖို့တစ်ခုတည်းပလက်ဖောင်းအသုံးချဖို့, အပေါင်းတို့သည်မိမိတို့ပေးပို့လိုအပ်ချက်များကိုပိုကောင်းအောင်ဖောက်သည်နိုင်ပါတယ်။
Nexidia QC အဆိုပါ Vantage ပလက်ဖောင်း၏ v6.3 သို့ပေါင်းစည်းနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းယခုရရှိနိုင်ပါသည်။
Nexidia နှင့်၎င်း၏ထုတ်ကုန်နှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုသိရှိလိုပါကအနည်းဆုံးရရှိနိုင် www.nexidia.tv.
Nexidia, မူပိုင်ခွင့်နည်းပညာများနှင့်အောင်မြင်မှုများ applications များကမြန်ဆန်လွယ်ကူသောဖောက်သည်အသစ်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုရဖို့သူတို့ရဲ့ယှဉ်ပြိုင်အားသာချက်မြှင့်တင်ရန်နှင့်ဖျော်ဖြေရေးကနေအသံနှင့်ဗီဒီယိုပိုင်ဆိုင်မှု၏ကြီးမားသော volumes ကိုမှငွေရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ဘို့လုပ်ကြောင်း, အားကစား, သတင်း, ပညာရေးနှင့်အတူအသံနှင့်ဗီဒီယိုရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည် ကော်ပိုရိတ်, အစိုးရ, ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ဘဏ္ဍာရေး, အိမ်သူအိမ်သားများနှင့် non-profit အဖွဲ့အစည်းများ။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များမှာရရှိနိုင် www.nexidia.tv.
အသံလွှင်း Nexidia Nexidia QC Telestream	2014-08-27
ယခင်: ဒိနျးမတျအသံလွှင့်ကော်ပိုရေးရှင်းနှင့်အတူ ioGates လက္ခဏာတွေ Long-Term မိတ်ဖက်သဘောတူညီချက်
နောက်တစ်ခု: Sonnet ရဲ့: Echo Express ကို III ကို-R နှင့် xMac mini ကိုဆာဗာနှင့်အတူတွင်-တည်နေရာအသံမှတ်တမ်းတင် Workflows Music ကိုရောသမမိုဘိုင်း်